Filtrer les éléments par date : dimanche, 19 mai 2019
dimanche, 19 mai 2019 14:14
Volana Ramadany: Nanolotra fanampiana ho an'ny mpino Silamo ny Faritra Boeny
Nanome fandraisana anjara fanomezana hanaovana iftar ho an'ny mpino silamo teto Mahajanga ao anatin'izao volana Ramadany izao ny faritra Boeny, izay notarihan'ny lehiben'ny Faritra.
Teto amin'ny Mosquée du Vendredi no nanolorana izany omaly.
Sambava: Tifitra nahafaty mpikirakira lavanila, miaramila amperin'asa iray voarohirohy
Tsy nanaiky ny hanolotra ny miaramilany izay voarohirohy ho nandray anjara tamin'ny fanafihana mitam-basy, ka nitifirana nahafaty ilay mpikirakira lavanila, nitranga tao Tsararivotra Fokontany Ambodisatrana 2, ny alin'ny 28 aprily 2019 lasa iny.
Henjana ny raharaha amin'izao satria tsy sahy hitsofoka any amin'ny Toby miaramila 711, kaompania Amborinala ny avy amin'ny Zandarmaria izay niandraikitra ny famotorana, na dia efa nahazo alalana avy amin'ny Fitsarana ambaratonga voalohany Antalaha aza.
dimanche, 19 mai 2019 13:49
Pierrot Matatana: Manohy ny fitsaboan-tenany atsy amin’ny nosy Maorisy
Atsy Maorisy hatry ny zoma tolakandro ilay mpanakanto sady mpamoronkira Pierrot Matatana. Ao amin’ny Clinique Fortis Darne ao an-tananan’i Floréal izy manohy ny fitsaboan-tena.
Tratry ny tsy fahasalamana tampoka i Pierrot Matatana tamin’ny fiandohan’ny volana aprily 2019. Niditra hopitaly tao amin’ny Befelatanana Antananarivo, sampana “Cardiologie” tamin’izay. Efa mihatsara ny fahasalamany na izany aza mbola mila fanaraha-maso sy fanohizana ny fitsaboana.
dimanche, 19 mai 2019 11:34
Ambilobe : Coupure de courant à partir de midi pour cause de retard d'approvisionnement en carburant
Indépendamment de la Jirama, elle annonce que dû au retard d'approvisionnement du carburant, l'électricité sera coupée à partir de midi ce dimanche dans la ville d'Ambilobe, faritany Antsiranana.
Ambilobe : Ho tapaka ny jiro noho ny solika tara
Misy fahatarana ny famatsiana solika ny tobim-pamokarana herinaratry ny JIRAMA eto Ambilobe. Tsy miankina amin'ny JIRAMA ny antony raha ny fanazavana.
Vokatr'izay dia hisy fahatapahana ny famatsiana jiro anio alahady manomboka any amin'ny mitatao vovonana any.